TALY NA RANDRANA : Famantarana ny fiaviana sy atao araka ny zava-mitranga
Anisan’ireo ampahafantarina mandritry ny ‘salon régional du livre et de la culture’ eto Mahajanga ny taly. 10 mai 2019
Fampirantiana ao amin’ny mozea akiba io entina ao amin’ny zaridaina Ralaimongo io. Samy manana ny taly na randrana mampiavaka azy ny foko, ary maro karazana izy ireo. Ny atao hoe taly na randrana moa dia fomba fibangoana volo fa aolankolana sy ampifandraisina ny volo, randranina na taliana ny filaza azy. Misy kosa anefa faritra manondro ny volo amin’ny teny hoe : randrana.
Ho an’ny malagasy dia maneho fifamatorana sy ny fitambarana, firahalahiana sy fihavanana ny randrana. Tsy nataotao foana izy ireo fa misy heviny. Amin’ny fiainana andavanandro dia ny kiteloanila, rongomandady ary difisesy no fitondra. Mandritry ny fety, ohatra, dia ny taly vodiketsa, kifitoanila, kisaronkisiny, vonkavia, kifapahonotsy, tanaivoho, somala, rongomitrantrana no fanao. Mandritry ny fampakaram-bady kosa dia ny tsangana fa handeha sy tombokatsena no atao. Rehefa misaona kosa dia ny kisotry sy ny kiambaramaina. Ny lehilahy indray dia manao ny rasaraka. Ankehitriny anefa dia mitombo ny karazana randrana. Ary tsy dia ampiharina amin’ny fotoana mifanaraka aminy fa samy manao izay tiany kosa.
Betsaka ihany koa ny finoana manodidina ny volo. Anisan’izany ny hoe tsy mitaly alina fa mahafaty mialohan’ ny fotoana. Tsy manapa-bolo amin’ny vaninandro fitsengerenan’ny daty nahaterahana fa mahafohy andro iainana. Tsy tapahana ihany koa ny volon’ny olona marary fa mahafaty azy haingana. tsy azo zaraina enina na valo ny volo randranina. Tsy isaorana ny olona mandrandrana fa mahasola loha. Mahasola toy izany koa ny fanisana ny randran’olona. Ary ny olona sola dia heverina fa nolelafin’angatra.